Semalt Inotsanangura Nzira Yokugadzira Meta Tsanangudzo Dzinokonzera Traffic In E-Commerce
Mune bhizimusi chero ripi zvaro, kutora nzira ndeimwe yenzira dzekuenda kumatenga matsva. WhenRun Search Engine Optimization (SEO), meta tags uye tsanangudzo ndiyo nzvimbo dzinokosha yekuisa makwikwi emazwi makuru. E-commerce metaTsanangudzo ndiyo mitsva pfupi.
HTML meta tags inopa server ruzivo rwakakosha pamusoro peji yewebhu. Iko nguva dzosemeta tag ye tsanangudzo yezvinyorwa zvepaji, meta tag yekodzero yemashoko uye meta tag inobata robots.txt - dimensioni panchina parco. Somuenzaniso,
Meta tsanangudzo tags zvakakosha zvikuru mumushambadziro wekutengeserana.Inopa kukurudzira kwekutonga nekukosha apo kugovera peji kunowanzoitika. Nokudaro, SMM ndiyo nzira yekutanga yekucheravatengi. Inobatsira kutanga kutanga-ups kurova makwikwi uye kupa munhu wese mukana wekutonga mu niches yavo.
Nik Chaykovskiy, mutariri wekubudirira kweKatereji Semalt rinotsanangura zvinhu zvinokosha zvaunofanira kufunga paunenge uchigadzira meta tsanangudzo.
Nguva yekushandisa Meta Tsanangudzo
Nokuda kwechinyorwa chemashoko makuru, tsanangudzo yemeta inogona kubatsira pakugadziravamwe kutendeuka. Meta tsanangudzo inopa vataridzi chimwezve chisimbiso pamusoro pezvinoenderana nehuwandu hwehupenyu hwako pane imwe yakagadzirirwa yemashoko makuru.Tsvaga mibvunzo, iyo inotarisa yakafanana inoda tsanangudzo yemeta kuti iparadze tie.
Semalt inokurudzira kusanganisira mutsara wemashoko ekutsanangura meta. Kana zvigadzirwarinosanganisira zvinopfuura zvitatu mazwi, usashandise muzvinyorwa zvemeta..Iyo injini yekutsvaga inogona kukanganisa nyore nyore nekuda kwekeyword stuffing, iyo, iyo, inokuwana iwe mureza. Iwe unofanirwa kutora chikamu chepeji iyoyo uye shandisa snippet kuti itave kuonekwatsvakurudzo yekutsvaga mashoko.
Kunyora Zvakanaka E-commerce Meta Tsanangudzo
Kune zvakawanda zvidzidzo, zvakanakisisa ndezvokuti meta tsanangudzo ndeyevanhu vane zviuru 160.Semuenzaniso, Google sekambani ine webhusaiti ine tsanangudzo yemeta, iyo ine mazita 159. Izvi zvinosanganisira kunyange zvivara sevanhu.
Paunenge uchitaura meta tsanangudzo yakanaka, zvinokosha kuifunga se tweet kanaFacebook post. Twitter ine muganhu wevanhu 160. Unogonawo kutevera mamwe emitemo inotevera:
Shandisa keywords. Tsvaga mitsara inopa zvinyorwa, izvo zvinotarisa kuti chiiuser use is search. Ndizvo zvakakosha kune zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti sargorithm ikuve iwe yakakwirira.
Shandisa verbs. Vhesi dzinokurudzira munhu kutora chiito pakarepo. Unogona kushandisamutsara wakafanana ne "Shop earphones at Jumia".
Shandisa call-to-action. Gadzira tsanangudzo yemeta nezviito zvakadai se "shop", "download" kana "kutenga".
Gadzira matanho. Icho chinotyisa zvikuru kunyora tsanangudzo meta itsva yega yegapeji. Kushandisa ma template, unogona kuita kuti zvive nyore.
Tsanangudzo dzeMeta dzinobatsira webhusaiti yako kuti ive yakakwirira kuburikidza nenzira dzisinganzwisisiki. Vakawandavanhu vanokundikana kuona kuti kuwana nzvimbo yakakwirira hazvireve kuti zvinotsanangurira. Meta tsanangudzo inoshandura munhu kutarisa peji kunetsvaga iyo. Iine mashoko anokosha anonzwisisika pamibvunzo yekutsvaga nokuda kweiyo yakagadzirirwa ye keywords. Vanotaurawo chimwechinhu chikuru, tsanangudzo yakazaruka. Meta tags dzakapfupika kuti dzive nehuwandu hwemagariro evanhu. Zvemagariro ezvehuwandu hutano humwe humwenzira dzinotevera backlinks uye kukosha kunogona kuwedzera SEO kukupa vamwe vashanyi.